Maxay kaga Dhigan tahay Guusha Modric ee Ballon d’Or Real Madrid… imisa Laacib ayaana hore ugu Qaaday Jaa’izadan Kooxda Spain Qarnigaan 21-aad – Gool FM
( Madrid ) 05 Dis 2018. Florentino Perez ayaa la wareegay xilka tababare ee kooxda Real Madrid sanadkii 2000 isagoo lasoo saxiixday durba Luis Figo xagaagaas, waxaana ninka Portuguese uu sanadkaa ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or.
Dhammaan, waxaa jira haatan siddeed abaalmarin oo ay ku guuleysteen xiddigo kasoo cayaaray Real Madrid qarnigan 21-aad.
Luka Modric ayaa noqday ku guuleystihii ugu dambayay ee abaalmarintaa kaddib Cristiano Ronaldo, kasoo afar mar ku qaaday shantiisa Ballon d’Or naadiga caasimada Spanish.
Intaa ka hor, Ronaldo Nazario iyo Fabio Cannavaro ayaa abaalmarinta qaaday iyagoo u dheelay kooxda cadcadka, 2002 iyo 2006.
Kaddib waxaa jiray kiisas kale sida Zinedine Zidane, Michael Owen iyo Kaka, kuwaa oo loo caleemo saaray jaa’izadan ka hor inta aysan lasoo saxiixan kooxda Santiago Bernabeu.
Zidane ayaa ku guuleystay 1998 isagoo u dheelayay Juventus ka hor inta uu ku biiray Real Madrid 2001-dii isagoona ku qaaday jaa’izadan.
Owen ayaa kaalinta sare ee abaalmarintan ku dhameystay 2001 isagoo Liverpool ah, ka hor inuu usoo dhaqaaqin Spain 2004.
Kaddib Kaka ayaa ahaa mid ku guuleystay 2007, intii uu kaga soo biirin Los Blancos dhigeeda AC Milan xagaagii 2009, waana isla sanadka ku guuleystihii Ballon d’Or 2008 Ronaldo uu ka yimid kooxda Manchester United.
Cajiib, qarnigaan 21-aad, kaliya afar shaqsi oo ku guuleystay jaa’izadan ayaa u cayaarin Real Madrida waana – Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Ronaldinho iyo Lionel Messi .
Hore waxaa abaalmarintan ugu qaaday kooxda Real, halyeeygoodii Alfredo Di Stefano iyo Raymond Kopa kuwaa oo loo caleemo saaray laacibka ugu wanaagsan caalamka waqtigii ay u cayaarayeen naadiga cadcadka.
"Ku guuleysiga Modrić abaal marinta Ballon d'Or 2018, waxay Cristiano ku dhiiragalin doontaa inuu ku guuleysto markiisii LIXAAD” - Allegri
“Modrić wuxuu u qalmay ku guuleysiga abaal marinta Ballon d'Or 2018” – mid ka mid ah difaacyada kooxda Barcelona